LT-K5 Wiricheya Kurema Wiricheya 18 Inchi Chigaro - Karman K0005
×	 LT-1000 - 23 lbs	1 × $169.00
View ngoro "LT-1000 - 23 lbs" yakawedzerwa kungoro yako.
Iyo LT-K5 wiricheya haina huremu uye kukwirira kuchinjika.
Iyo yakagadzirirwa avo vanoda zvishoma zvekuwedzera kugadzikana. Ichi chigaro chinoratidzira yakasimba-yakasimba aluminium furemu, chigaro chakapetwa kaviri, uye beefy 24 x 1 3/8 ″ kumashure matairi. LT-K5 wiricheya inouya nhema uye inotsigira 250 lbs huremu huremo.
Ichi chigaro chewiricheya chine zvakare kusvetuka-kure kuchabviswa, kukwirira kunogadziriswa tsoka dzetsoka. LT-K5 inowanikwa ine chigaro upamhi hwemasendimita gumi nemasere.
Unoda kuti itumirwe nekukurumidza uye yakananga kubva kudura redu? Hapana dambudziko. Iwe unogona kusarudza kugadzirisa uye kusarudza kunze kwakawanda sarudzo kubva pazasi donhwe menyu. Iwe unogona zvakare kuidana iyo mukati kana iwe uchida kuwana yako odha pane que. Isu tinokwanisa kukurumidza kutumira kubva kudura redu zuva rimwe chetero kune ese maodha akaiswa pamberi pa3 pm Pacific Standard Nguva. Izvo zvakakosha kuti isu tipe vatengi vedu ruzivo rwakanakisa runogoneka uye ruzivo rwekutenga. Kuendesa yako wheelchair yakakwana iwe kana mudiwa iri pamusoro chaipo peedu pekutanga runyorwa.
* Yekukurumidza ngarava yako LT-K5 wiricheya yekutarisa, edu akajairwa base mamodheru anozotumirwa mu18 - chigaro upamhi. Iwe unogona zvakare kugadzirisa pane inodonhedza menyu pazasi.
Ndokumbira utarise kune iyo kadhi yewarandi yakanamatira kune chimwe nechimwe chigadzirwa kuti uwane rumwe ruzivo nezvematongerwo enyika nemaitiro. Iyo warandi inowedzerwa chete kune iyo yekutanga kutenga uye kuendesa kwechigadzirwa. Warranty haichinji. Zvikamu kana zvigadzirwa zvinoiswa pasi zvakajairika kusakara uye kubvarura izvo zvinofanirwa kutsiviwa / kugadziriswa ibasa remuridzi. Inokuvadzwa inokonzerwa nemushandisi kushaya hanya, tsaona kukuvara nemaune kana kwete hazvina kuvharwa pasi peFekitori garandi. Arm padhi uye upholsteries hazvina kufukidzwa newarandi. Zvinokurudzirwa kuti chero zvirevo pasi pechivimbiso zvidzorerwe kumutengesi ane mvumo yekushandira kuburikidza neyaakatenga kubva kwaari.
Kana Warranty Kunyoresa Kadhi isiri pafaira yeiyo murandu chigadzirwa, ipapo kopi yeinvoice ine zuva rekutenga rinofanira kupihwa. Iyo garandi nguva yemutengi inotanga pazuva rekutenga remutengesi. Nguva yewarandi kumutengesi, kana zvigadzirwa zvisati zvichizotengeswa kumutengi, zvinotanga pazuva reinvoice kubva kuKarman. Iyo waranti haina basa mavhiripu iyo yakabviswa serial # tag yakabviswa uye / kana kuchinjwa.
hapana 18 ″ x17 ″
hapana Standard Kukwidza (+ $ 60.00)
hapana 18 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”Cushion (+ $ 219.00)	18 ″ x16 ″ Chigaro cheFoam Cushion (+ $ 72.00)	18 ″ x16 ″ Chigaro Gel Cushion (+ $ 98.00)
hapana 18 "Wide Yekuyeuka Furo 2" Cushion (+ $ 189.00)	18 "Wide Back Foam Cushion (+ $ 98.00)
Sarudzo uye zvishongedzo
Clamp Style Chigaro Bhandi 2 Piece (+$19.00)
Auto Chimiro Chigaro Bhandi 2 Piece (+$24.00)
16 ″ -18 "Width Yakapetwa Inosungirirwa Musoro ne Assembly (+$154.00)
18 "Rakafara Gumbo Tambo - Mhuru Kutsigira (+$11.00)
Yese Yekutakura Homwe - Saizi: Diki (+$11.00)
Yese Yekutakura Homwe - Saizi: Huru (+$19.00)
Yese Mukombe Mubati (+$19.95)
Max Alarm - Inotakurika Yega Yekuchengetedza Alarm (+$19.99)
Sungira Pasi Kit 15ft / 4.5m (+$39.99)
LT-K5 - 28 lbs huwandu
SKU: LT-K5 Categories: Wiricheya isingaremi, Ultra Lightweight Wiricheya Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Chiedza ichi wiricheya ine chigaro chakapetwa kaviri uye chakakura, chakasimudzwa matairi ekumashure anoyera 24 ″ x 1 3/8 ″. Iwo mavhiri epamberi ane 7 ″ x 1-casters ane forogo inogadziriswa, yakakura kudarika yakajairwa mavhiripu. Iyo armrests inodzokera kumashure uye inokwenenzverwa kukwirira, ichiita kuti ive inoenderana neanenge chero mushandisi. Izvi wiricheya ine Push yekukiya mabhureki akagadzirirwa manyorerwo ekubatanidzwa uye anogara akaumbika emativi epaneru ekudzivirira.
Kupeta backrest kuitira nyore kutakura
Flip back armrest yekuchengetedzeka uye nyore
Kureba chinogadziriswa armrest inobvumira kukwana kwakaringana chero mushandisi
Swing away bvisika tsoka yekumusoro nekukwirira inogadziriswa tsoka
Dual padded chigaro upholstery yekuwedzera kusimba uye nyaradzo
Pushira kukiya mabhureki akagadzirirwa chero mushandisi wechero zera kuti aite nemaoko
Anogadzikana anoumbwa nemativi emadziro ekudzivirira
Flat yemahara 7 "x1" kumberi casters nehurefu hunogadziriswa forogo
Flat yemahara yakakwira yekutsika 24 "x1 ″ 3/8" kumashure mavhiri
Chimiro Ruvara: Dema
Chigaro Kudzika 17 padiki.
Kureba Kureba 17 padiki.
Kunopindirana Kureba 34 padiki.
Pakazara Hupamhi Hupamhi 24.5 padiki, 26.5 padiki.
Kurema Pasina Riggings 28 lbs.
Kurema Kugona 250 lbs.
Kutumira Kukura N / A
Nekuda kwekuzvipira kwedu mukuvandudza kunogara kuripo, Karman Healthcare inochengetera kodzero yekuchinja maratidziro uye dhizaini pasina chiziviso. Kupfuurirazve, kwete ese maficha uye sarudzo dzakapihwa dzinoenderana neese magadzirirwo eiyo isina kurema wheelchair.
LT-K5 Wiricheya UPC #
LT-K5N * yamiswa * 045635100084
Ultra isina kurema wheelchair
31 × 13 × 35 mukati
Kufamba Kure, Inobviswa
16 "Chigaro, 18 "Chigaro
S-ERGO YAKACHENA - 25
LT-990 - 24 lbs
LT-2017-19 - 19 lbs
KN-TV10A - 14.9 lbs